पुनर्वासमा भाषा संरक्षणको आग्रह | Bhutan News Service
Home नेपाली पुनर्वासमा भाषा संरक्षणको आग्रह
पुनर्वासमा भाषा संरक्षणको आग्रह
गंगाराम लामिटारे, ओहायो, अमेरिका
तेइस वर्षअघि मार्च १७,१९९३ मा स्थापना भएको नेपाली भाषा परिषद् भूटान, नेपाली साहित्य परिषद् भूटान र वर्तमान साहित्य परिषद् भूटान नै भूटानीको सबैभन्दा जेठो भाषिक एवं साहित्यिक संस्था हो । शरणार्थी जस्तो विकट अवस्थामा पनि भाषिक एवं साहित्यक सङ्घर्ष गर्दै आएको परिषद् पुनर्वाससँगै वर्तमान अमेरिका भित्रिएको छ र अमेरिकाको ओहायोको केण्टमा औपचारिक रूमपमा दर्ता पनि भइसकेको छ । यसको तत्कालीन उदेश्य भनेको मातृ भाषा पढ्न पाउँने व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार हो र मातृ भाषाको पठनपाठनका माध्यमबाट समृद्ध भाषाको विकास गरेर स्तरीय साहित्यको सिर्जना गर्नु हो । भाषा परिष्कार नभएसम्म स्तरीय साहित्यको जन्म हुनसक्दैन । यो भाषा परिषद्को मान्यता हो ।
यद्यपि नेपाली साहित्य परिषद् भूटान, नेपाली पुस्तकहरू जलाइएका ती दुरदिनहरूको पृष्ठभूमि हो । गोली ठोकी मारिएका तमाम शहीदहरूका त्याग, तपस्या र बलिदानको इतिहास हो । जेलमा सडिरहेका र गलिरहेकाहरूका भूटानी जनताहरूको मलमपट्टि र आवाज पनि हो। समस्त भूटानीहरूको सम्झनाको झिल्को र चेतनाको चिनारी हो । भाषाका लागि भोको पेट र खाली खुट्टा खट्ने ती तमाम स्वयंसेवकहरूको वर्तमान हो र भावी पुस्ताका लागि सुनिश्चित भविष्य हो । धुक्धुकी, स्वभिमान र जातीय पहिचानको मेरुदण्ड पनि हो । खासगरी प्रवासमा लामो समयदेखि जनताको सेवा गर्दै आउने संस्थाहरूमध्ये २ वटा संस्थाहरू मात्र जीवित छन् । भूटान न्युज सर्भिस र नेपाली साहित्य परिषद्, भूटान । एउटाले सूचना र अर्कोले चेतना र सिर्जनाको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन । समाजका लागि निरन्तर सेवा दिइरहेका यी ऐतिहासिक धरोहरलाई बचाउँनु हामी सबैको साझा कर्तव्य पनि हो । स्थापना काललेखि नै परिषद्ले सञ्चालन गरेका शैक्षिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमबाट ८ हजारभन्दा बढी भूटानीहरू लाभान्वित बनेका छन् । त्यसमा ५ सयभन्दा बढी त शिक्षकहरू छन् । यसै गरी परिषद्को वार्षिक साहित्य प्रकाशन कोपिलाबाट लेख्न सुरू गर्नेहरू नै आज साहित्यकारका रूपमा अफूलाई स्थापित गर्ने क्रममा छन् । तर सिर्जना अभ्यासको वास्तविक पृष्ठभूमि मानिएको परिषद् र कोपिलाको योगदानबारे लेख्न निकै कन्जुस्याइं गरिएको छ । शिवलाल दाहालद्वारा लिखित “अलविदा बेलडाँगी”ले जति लेख्नुपर्थ्यो, त्यति लेख्ने जमर्को गरेन । त्यस्तै एतिहासिक भनिएको गजल सङ्ग्रह “दबाइएका आवाजहरु”ले समेत २३ वर्ष लामो भाषिक सङ्घर्ष, साहित्यिक क्रान्तिको इतिहासप्रति इमानदारिता बिर्सिएको छ । स्कुलका भित्तेपत्रिका र हवाइपत्रिकाहरू अटाउन सक्ने त्यस कृतिमा ६ अंकसम्म निरन्तर प्रकाशित भएको कोपिला अटाउन सकेन । त्यस कालखण्डमा लेखिएका गजल र तिनीहरूका स्रष्टाहरू अटाउन सकेनन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि वास्तविक इतिहासप्रति जानीजानी दुराग्रह गरिएको छ । चेतना र सिर्जनाको २३ वर्ष लामो इतिहासलाई कुल्चिएर लेखिएका यी कृतिहरू आफैमा पूर्ण छन् वा अपूर्ण, त्यो त समालोचक र इतिहासकारहरूले जान्ने कुरा हो । कुनै पनि कृतिको स्तर निर्धारण गर्ने कार्य समालोचक वा सम्बन्धित इतिहासकारको हो । स्वयम् लेखकले नै कृतिको मूल्य निर्धारण गर्ने हो भने समालोचक र इतिहासकारहरूको के काम ? इतिहास भनेको सत्यको दस्ताबेज हो र लेख्नेहरूले सही अनुसन्धान गरेर मात्र सत्य र तत्थ्यलाई उजागर गर्नसक्नुपर्छ । यो इतिहासकारहरूको धर्म हो । यसरी दुई दर्जनभन्दा बढी कवि र कलाकारहरूको सम्मान र अभिनन्दन गरिसकेको, हजारभन्दा बढी सदस्यहरु भएको र आधा दर्जनभन्दन बढी आजीवन सदस्यहरु भएको, विभिन्न विषयमा विद्यावारीधि गरेका ५ जना प्रोफेसरहरू सम्मानित सल्लाहकारसमेत रहेको साहित्य परिषद्लाई मास्ने चलखेलहरू पनि भइरहेका छन्, यतिबेला । २३ वर्ष लामो चेतना र सिर्जनका क्षेत्रमा संर्घष गर्दै आएको भूटानकै जेठो साहित्यिक संस्थाको योगदानलाई सम्मान गर्नुको सट्टा त्यसको अस्तित्व माथि नै बहस हुनथालेको छ । सबैतिरवाट नेपाली पठनपाठनका लागि साहित्य परिषद् पुनः सक्रिय हुनुपर्छ भनेर जनआवाजहरू उठिरहेका बेला एकताको बहस सुरू भएको छ । एकता हुनु राम्रो कुरा हो । तर एकता भएर केही गरेको उदाहरण पनि हामीसँग छैन । नेपालमा एकताको नाममा दुई दशक खेर फालियो । यो कसैले बिर्सिएको छैन । पुनर्वासमा पनि एकताको नाममा त्यही पुनरावृत्ति हुँदैछ । परिषदबाट यदि कोही फुटेर गएका छन् भने ती पुनः सामेल हुन सक्लान् तर प्रतिपस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिले खास कुनै उपलब्धि हुनेछैन | प्रसिद्धिको उच्चाइमा पुर्याउनका लागि मात्र गठित हुँदैन संस्था । कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्थापित भएको हुन्छ । त्यस्तो संस्थालाई कसैले मास्न पनि चाहदैन । एकता त गफ मात्र हो , समयको बर्बादी हो । बरु, कामले एकता गर्नसक्छ । त्यसैले आजको अवश्यकतातिर कदम चाल्न जरुरी छ । इतिहासलाई कुल्चिने र ढाड भाँच्ने कामबाट कसैको हित हुँदैन । नयाँ मार्ग निर्माणको झन्झटतिर लाग्नुभन्दा बरु पुरानैलाई सुधार गरेर हिँड्दा छिट्टो गन्तव्यमा पुग्न सकिएला । व्यक्तिसँग असन्तुष्टि र दुराग्रह छ भने त्यसलाई सम्वाद र छलफबाट समाधान गर्न सकिन्छ नै । त्यसैले हाम्रो यो भाषिक धरोहरलाई बचाउनको निम्ति यस्ता चलखेल र षडयन्त्रहरूबाट कसैले विचलित हुने आवश्यकता छैन । अतः सबै सिर्जनशील युवाहरूलाई साथमा लिएर अघि बढ्न साहित्य परिषद् भूटानका वर्तमान कार्यकर्ताज्यूहरू, शुभचिन्तकज्यू र भाषा साहित्यलाई माया गर्ने सबै भूटानीहरूमा हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
पश्चिमतिर सरेको नाथे ९ वर्ष नबित्तै अघिल्लो र पछिलो पुस्ताबीच नेपालीमा बोल्चाल हुनछाडेको छ । बच्चाले नेपाली बोलेकोमा भन्दा बिर्सिएकामा बढी गौरव महसुस गर्न थालिएको छ । स्थापित साहित्यकार, कलाकार र नेपाली भाषामै जागिर गर्ने सयौँ दोभाषेहरूका घरमासमेत नेपाली भाषाको प्रयोग हुन छाडेको अवस्था छ । पुनर्वासका शुरुकै वर्षमा भाषाको यो स्थिति छ भने २५ वर्षपछिको अवस्था कस्तो होला ? परिकल्पना नै गर्न सकिन्न ।
सात वर्षसम्मका बच्चाहरूलाई साधारण बोलचालका लागि ३० देखि ३५ सय शब्दहरूको अवश्यकता पर्छ । के घरमै त्यस्ता शब्दहरु सिक्ने वातावरण हामीले निर्माण गरेका छौँ ? बच्चाहरूले यति छिट्टो भाषा बिर्सिनुमा कस्को लापर्वाही हो ? बच्चालाई बुवा-मुमा सिकाउनुको सट्टा डेडी मम्मी, मामा-माइज्युको सट्टा अंकल र आण्टी सिकाएर भाषा र संस्कृति पक्षपोषण गर्ने हामी भोलिका लागि कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौं ? कुरा गम्भीर छ । सन्तानलाई डाक्टर, इञ्जिनियर, प्रोफेसर र वैज्ञानिक बनाउने होडमा भाषा, संस्कार, संस्कृति र सामाजिक दायित्वहरू सिकाउन बिर्सिएका त छैनौँ ? बच्चाको कलिलो बुद्धि मुछेको माटो न हो, जसलाई जस्तो बानाउन चाह्यो पछि त्यही बन्ने न हो। आमा-बाबुको काख नै बच्चाहरूका लागि पहिलो पाठशाला हो र बाबु-आमा पहिलो गुरु पनि । प्रारम्भमा गुरुले जे सिकायो, त्यसैबाट बच्चहरूको जीवन अनुप्राणित र प्रभावित हुन्छ । जस्तो वृक्ष रोप्यो त्यस्तै फल र जति मलजल गर्‍यो त्यही अनुरूपको फलहरू फल्ने न हो । कवि शिरोमणि लेखनाथले भनेझैं-
खोज्छौ स्वर्ग गर्छौ पाप, जान्दैनौ कर्मको गति ।
रिठ्ठाको बोट रोपेर, कहाँ फल्दछ कागति ?
भाषा साहित्यको नाममा संस्था खोल्ने र भत्काउने अभियान नै चलेको छ । सामाजिक सरोकार भन्दा पनि बढी संस्थाहरू व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका माध्यम र विज्ञापनका साधन बनेका छन् । नेता बन्ने महत्वकाङ्क्षा युवाहरूमा बढ्दै छ । संस्था खेल्ने र त्यसको प्रमुख बनेर रातारात सस्तो प्रसिद्धि कमाउने प्रवृत्तिले समाजमा अन्योल र वितृष्णा बड्दैछ । संस्था खोल्ने, कृति प्रकाशन गर्ने र त्यसै संस्थाबाट आफू स्वयम् सम्मानित हुने परम्परा स्थापित भएको छ । संस्था गठन हुनु आफैँमा नराम्रो होइन तर समाजको आधारभूत अवश्यकताप्रति जवाफदेही बन्न नसक्नु नै ती संस्थाहरूको ठूलो कमजारी हो भन्ने मलाई लाग्छ । एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने र धारेहात गरेर सराप्नेमा युवापुस्ता व्यस्त छ । म मात्र जान्ने, अरू सबै मूर्ख, मैंले गरेको मात्र ठिक, अरूले गरेको वेठिक भन्ने अभ्यासबाट सचेत र सिर्जनशील युवाहरू आक्रान्त छन् । एकले अर्कालाई सम्मान र इज्जत गर्नुका सट्टा म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । समाजलाई निस्वार्थ सेवा दिने काम भाषिक एवं साहित्यिक संस्थाहरूको हो भन्ने कुरा सबैले बिर्सिए झैँ छ । स्वार्थपूर्ति र प्रसिद्धिको महत्वकाङ्क्षाबाट साहित्यक्षेत्र धराशायी भएको छ । राजनीति र साहित्यको धरातल एकै भए पनि विधागतरूपमा पृथक् हुन् भन्ने पनि बिर्सिए जस्तै छ । साहित्य राजनीतिको मैदान भएको छ । साहित्यलाई राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन भन्ने चेत पनि हराए जस्तै छ । खासै कामभन्दा पनि बढी नामकै लागि सामाजिक सन्जालमा होहल्ला चलाइएका छन् । कृतिहरू प्रकाशन र गीति एल्वमहरूको ओहिरो लागे पनि ती वास्तविक स्तरीयताबाट चिप्लिएका छन् । एक दुईवटा गजल र रूबाइ सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नेहरू पनि आफूलाई स्थापित साहित्यकारका रूपमा प्रतिष्ठापित गर्ने प्रयासमा छन् । भाषा हराए पनि साहित्यिक आन्दोनहरू चल्दैछन् । जस्तासुकै सिर्जना भए पनि त्यसले साहित्यिक मान्यता पाउनु पर्छ भनेर स्वीकारोक्ति अभियानहरू चालिँदैछन् र त्यस आन्दलनको नेतृत्व विश्व भूटानी साहित्य सङ्गठनले गर्दैछ । एकपछि अर्को कृति र एल्बमहरू प्रकाशनको ताँती नै लागे पनि ती सामाजका सम्पत्ति बन्नसकेका छैनन् । सिर्जना भन्ने कुरा आफ्ना लागि नभएर समाजका लागि हुनुपर्ने हो तर हामीकहाँ त्यस्तो देखिएन । समाजका लागिभन्दा पनि व्यक्तिगत प्रसिद्धि र जस्तो लोकप्रियता चुम्ने अभिप्रायबाट कृतिहरू प्रकाशन भएका छन् र सङ्गठनहरू खोलिका छन् । त्यसैले अधिकांश कृतिहरू र साहित्यिक संस्थाहरू सामाजिककरण हुन सकेका छैनन् । लेखक, साहित्यकर र कविको वास्तविक परिभाषा के हो भन्ने बोध पनि हामीले बिर्सिसका छौँ । कला र सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । अब भन्नुहोस्, हाम्रो साहित्य र सङ्गीत अग्रगमनतिर छ वा प्रतिगमनतिर ? छुट्याउन निकै गाह्रो छ यतिबेला ।
ठेलीका ठेली किताब पढेर आफूलाई शिक्षित त ठानियो तर व्यवहार पढिएन । नैतिकता र संस्कार सिकिएन । भूटानमा निर्देशक र डासो हुने र नेपालमा राम्रो शिक्षक बन्ने दौडमा हामीले सामाजिक मूल्य, मान्यता, नैतिक जिम्मेवारी र कर्तव्यसमेत बिर्सिदियौं । सन्तानलाई जहिले अर्कालाई उछिन्ने, जितेर अघि बढ्ने र पढेर दोस्रो होइन पहिलो हुनुपर्छ भन्ने मात्र सिकायौं । वर्तमान युवाहरूमा देखिएको अकर्मण्यता नै हाम्रा तिनै गलत अभ्यासका दुष्परिणामहरू हुनसक्छन् । शिक्षाका साथसाथै संस्कृति, सभ्यता, परोपकार, अग्रजहरूको सम्मान, अशक्तहरूको सेवा र सहयोग पनि गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको भए आज छोराले छाड्यो, छोरीले बिर्सिई, बुहारीले हेला गरी र सन्तानले समाजलाई बिर्सिए भनेर टाउकामा हात राखेर छात्ती पिटीपिटी रूनुपर्ने थिएन नै । जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल फल्ने न हो । संस्कारविनाको शिक्षाले पक्कै पनि कसैको भलो गर्दैन भन्ने चेत सबैमा हुनुपर्छ । र सन्तानलाई शिक्षाका साथसाथै संस्कार, संस्कृति र नैतिक शिक्षा पनि त्यतिकै जरुरी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
भाषा रह्यो भने मात्र साहित्य रहन्छ र जातीयता बाँच्न सक्छ । भाषा नै रहेन भने न साहित्य रहनसक्छ न त साहित्यिक अभियान नै बाँच्नसक्छ; न त संस्कृति र कला नै जीवित रहनसक्छ । हाम्रो अवस्था नेपाली मित्रहरूको जस्तो छैन, नेपालीहरूको आवागमन भइरहेकाले भाषाको समस्या छैन । नेपालबाट प्रवास भित्रिने हरेक मानिसले भाषा लिएर अएका छन् । साहित्य र संस्कृतिका कोशेली लिएर अएका छन् । नयाँ आउने र पुराना नेपाल जाने क्रम जारीरहेकाले पनि भाषाको सङ्कट त्यति झेल्नुपरेको छैन । फेरि उनीहरू भाषा र संस्कृतिप्रति धेरै सम्वेदनशील छन् । भाषा र संस्कृति बचाउने अभियामा उनीहरू एक छन् र व्यक्तिगत वा संस्थागतरूपमा बच्चालाई भाषा सिकाउने महाअभियानमा जुटेका छन् । तर हामीसँग पुनर्वासको क्रमसँगै नेपाली भाषाको स्रोत पनि सकिँदैछ । व्यक्तिगत पहलमा भाषा शिक्षणको कामहरू भए पनि त्यसलाई संस्थागत बनाउन सकिएकौ छैन । साहित्यको मेरुदण्ड भनेको भाषा हो । भाषा नभै साहित्यको सिर्जना हुनसक्दैन । भाषाविनाको साहित्यलाई कसैले पनि बँचाउन सक्दैन । फेरि भूटानी नेपाली साहित्यलाई नेपाली साहित्यको मूलधारभन्दा छुट्टै राखेर लैजाने हो भने हामीले साहित्य लेख्नेलाईभन्दा बढी भाषा पढाउनेहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्छ । सम्मान र पुरस्कृत गर्नसक्नुपर्छ । नेपालीमा लेखिएका कृतिहरू भोलि सन्तान र समाजका लागि हुँदैन भने कृति प्रकाशनको कुनै औचित्य छ जस्तो लाग्दैन । बच्चालाई भाषा सिकाइएन भने आज प्रकाशित कृतिहरूले भोलि कुँडादानी भरिनेछ । त्यसैले वर्तमान नेपाली भाषाका कक्षाहरू सञ्चान गर्दै आउने तमाम ती योद्धाहरूलाई सलाम गर्नुपर्छ । सन्तानका भविष्यका लागि आफ्नो वर्तमान समर्पण गर्ने ती महान् व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिकताका साथै प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नसक्नुपर्छ ।
अझै पनि केही बिग्रिएको छैन । सम्भावना उत्साहजनक छ । तर भाषा सिकाउने स्वयम् सेवकरूलाई प्रशिक्षण र पाठ्यपुतकको निर्माणका लागि भाषिक वा साहित्यिक संस्थाहरू अघि आउनुपर्छ । भाषा पढाउन सुरु नगरिएका सहर वा राज्यहरूमा पनि पठनपाठनको अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्छ । यसका लागि भाषा परिषद्को हालै सम्पन्न पिट्स्वर्ग सम्मेलनबाट पारित नेपाली पाठ्यपुस्तक तयारीको कार्यक्रमलाई तीव्र गरिनुपर्छ । पाठ्य-सामग्रीहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनमा ढिलो भइरहेको छ । साहित्य सिर्जनाको सम्भावना राम्रो छ, तर गजल मात्र साहित्य हो भन्ने वर्तमान सोच र धारणालाई सिर्जनात्मक लेखन तालिमहरूको आयोजना र अन्तरसम्वाद गरेर साहित्यका अन्य विधाहरूतर्फ मोड्न पनि त्यतिकै जरुरी छ । स्तरीय साहित्य लेखनका लागि सक्षम व्यक्तिहरू सम्मिलित एउटा बोर्ड वा समिति गठन गर्न पनि त्यतिकै जरुरत छ । उक्त आधिकारिक समिति वा बोर्डलाई अन्तिम जँचाएर मात्र कृतिहरू प्रकाशन गर्ने प्रणालीको व्यवस्था हुनसकोस् । पुनर्वासपछि हाम्रा शैक्षिक, आर्थिक र राजनैतिक समस्याहरू त समाधान भए तर भाषिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या भने यथावत छ । अनि यसका लागि किन आजैवाट नजुट्ने ? प्रवासमा भाषा मात्र जोगाउँन सकियो भने संस्कृति केही समयपछिसम्म रहनसक्छ । त्यसैले आफ्ना बाल-बालिकालाई नेपालीको अक्षर चिनाउँने महाअभियान घरैबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ । स्वयम् व्यक्ति वा संस्थाहरू यस अभियानमा जुट्नुपर्छ । रिस, राग र गालीबाट होइन प्रेम, सद्भाव र एकताबाट अघि बड्नुको कुनै विकल्प छैन ।
नेपाली जातिहरूका आ-आफ्नै मातृभाषाहरू छन् । घरमा मातृभाषा बोले पनि व्यवहारमा सबैले बोल्ने, बुझ्ने, साहित्य सिर्जना गर्ने र व्यापार व्यवसायको साझा सम्पर्कको साझा माध्यम नेपाली भाषा नै हो। नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषाको रूपमा मात्र सीमित रहेन अब, दक्षिण एसियाकै हिन्दीपछि बोलिने दोस्रो भाषा पनि हो । नेपालबाहेक भूटान, बर्मा, बङ्गलादेश, भारतमा मात्र होइन विश्वको कुनै पनि देशमा बसेवास गर्ने सबै नेपालीहरूको साझा सम्पर्कको अनिवार्य माध्यम नेपाली भाषा नै हो । नेपाली भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाकारूपमा स्थापित हुने क्रममा छ । यो नेपालीहरूका लागि गौरवको कुरा हो । अब यसैलाई गौरव मानेर बस्ने अवस्था छैन । साझा भाषा नेपालीको संरक्षण र संवर्द्धनमा जुट्नु हामी सबैको साझा दायित्व पनि हो भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ । विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदाय र वर्णहरूको एकताको बलियो सूत्र नेपाली भाषा नै हो । चाहे नेपाली इसाइ होस् वा किराँत, चाहे नेपाली बौद्ध हुन् वा हिन्दु सबैको साझा सम्पर्कको अनिवार्य माध्यम त अन्ततः नेपाली भाषा नै त हो। तर विडम्बना! संसारका मानिसहरू आफ्नो नामका लागि सङ्घर्ष गर्छन्, संस्कृति र पहिचानका लागि मरिमेट्छन् तर हामी भने नामै बेच्दैछौं, संस्कार साट्दैछौं । पुर्खाले दिएका सांस्कृतिक धरोहरहरू सखाप पार्ने अभियानमा उद्यत छौँ। कृष्णहरू कृस बनिदैछौं । जसबहादुरहरू ज्याक्शन हुँदैछौं र जानुकाहरू जेसिका हुँदैछन् । प्रवासमा खोलिएका भाषिक तथा साहित्यिक संस्थाहरू पनि जातीयता बोध गराउने शब्दहरू हटाएर सिंग र पुच्छर बिनाको जानवर जस्तै बनिदैछन् । २४ वर्ष मै सन्तानहरू पुर्खाप्रति यति कृतघ्न हुन्छन् भन्ने भाषा, संस्कृतिका लागि शहीद हुनेहरूले कहिले पनि सोचेका थिएनन्, ती जेलमा सडिरहेका दाजुभाइहरूले कल्पना अवश्य गरेका थिएनन् नै । हामी जहिल्यै पनि अरूका लागि ढाल भयौँ । अर्काकै मनोरञ्जका गोटी भयौँ । परायकै देश र समाजका लागि बहादुर भयौँ । अर्काकै प्रचारबाजी र विज्ञापनका माध्यम बन्यौं । जब आफ्ना लागि केही गर्ने बेला आयो अनि हामी आपसमा लडिरहेका छौँ । आफ्नो पहिचानलाई छाडेर अरूसँग सती गइरहेका छौँ ।
नेपाली जोडेरै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सबै भाषा र साहित्यको काम गर्नसक्छ, गोर्खापत्र संस्थानले नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा पत्रपत्रिका प्रकाशित गर्नसक्छ । तर हामीकहाँ नेपाली जोडिएका संस्थाहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच पलाएको छ । अरूलाई समेट्ने नाममा आफू मेटिदैछौं, आफ्नो पहिचान र स्वभिमान मेटाउँदैछौं । जोंग्खा भाषा त एउटा सम्वाद मात्र हो साहित्य होइन । राष्ट्रिय ढिकुटी रित्याएर बन्दुकको बलमा निर्माण गरिएको भाषा हो । जुन भाषाको इतिहास सय वर्षभन्दा लामो छैन, त्यस भाषाको साहित्य कस्तो होला ? नेपाली साहित्यलाई भूटानी भन्ने हो भने १९९० पछि भूटानमा नेपाली भाषा नै प्रतिबन्धित अवस्थामा छ । जसको अस्तित्व नै समाप्त पारिएको छ । अङ्ग्रेजी त्यसै पनि संसारको बृहत् र सम्भ्रान्त साहित्य हो त्यसको विकास र प्रवर्धन हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन । आफैँ सम्पन्न र विकसित साहित्यको उन्नति गर्न के जरुरी छ ? बरु, संसारमा हामी थोरै छौं । सिन्धुमा बिन्दु छौँ । सिन्धुको होइन अब बिन्दुको संरक्षण गर्न जरूरी छ । नेपालीहरूले स्थापना गरेका संस्थाहरूमा नेपाली जोड्दा हानीभन्दा पनि बढी फाइदहरू छन् । नेपाली शब्द जोडिनासाथ दुई करोड नेपालीको सरोकार बढ्छ । जातीय शब्दले जहिले नजिकपन ल्याउँछ । नेपाली मनलाई प्रभावित पार्छ । एउटा नेपालीको उन्नति र अवन्नतिप्रति उत्सुकता र चासो राख्ने पनि अर्को नेपाली नै त हो । भूटानी त हाम्रो राष्ट्रियता मात्र हो, तर जातीयता नेपाली हो । प्रवासमा राष्ट्रियताभन्दा पनि जातीय अभियानलाई प्राथमिकता दिन नितान्त आवश्यक छ । राष्ट्रियता त्यति बेलासम्म रहन सक्ला जति बेलासम्म भूटानमा जन्मिएको पुस्ता जीवित रहनेछ । त्यसैले अबको अभियान जातीय पहिचानका लागि हुन जरूरी छ । यसतर्फ हामीले केही गरिएन भने एक दिन हाम्रो भाषा, संस्कृतिका साथै पहिचान पक्कै पनि मासिनेछ । सन्तति बिचल्लीमा पर्नेछ । बाटो हराएका भावी सन्नतिले हामीलाई धिक्कार्ने छन् । र हाम्रा शुभचिन्तक र मित्रहरूबाट पनि डरलमा सति गएका भूटानी भनेर हाम्रो खिल्ली उडाइनेछ । त्यसैले बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
यद्यपि मानिस हिन्दुबाट इसाइ र इसाइबाट हिन्दु बन्न पनि सक्दोरहेछ। त्यसैगरी बौद्धबाट इसाइ र इसाइबाट बौद्ध बन्न पनि सक्दोरहेछ। किराँतबाट इसाइ र इसाइदेखि पुनः किराँतमा फर्किन सक्दोरहेछ । चाह्यो भने यसरी आस्था र विश्वास पनि परिवर्तन हुँदोरहेछ र नाम पनि फेरबदल गर्दा हुँदो रहेछ । तर भाषा र जाति भनेको सत्य, शास्वत अपरिवर्तनीय रहेछ । त्यसैले चाहे बौद्ध होस् वा इसाइ, चाहे हिन्दु होस् वा किराँत अन्ततः सबैको जात र पहिचान त नेपाली नै हो । सबैको दु:ख सुख साटासाट गर्ने साझा माध्यम त नेपाली भाषा नै हो । आस्था, विश्वास, अभ्यास र मन्तव्यहरू फरक फरक भए पनि अन्तत: सबैको गन्तव्य त एउटै न हो । तन फरक फरक भए पनि अन्ततः मन त सबैको नेपाली नै हो । यसरी जातीय पहिचान र परिचयको शास्वत र अनिवार्य माध्यम बनेको नेपाली भाषाको पठनपाठनका लागि सामूहिक अभियानको त्यतिकै खाँचो छ ।
भन्नै पर्ने कुराः
मातृ भाषा नै हराइरहेको बेला हामी समग्र देशको साहित्यको कुरा गर्छौँ । आफ्नो साहित्य नै दिशाविहीन भइरहेका बेला हामी विश्व साहत्यको गफ छाँट्छौँ । राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिनिधित्व गर्नु राम्रो हो । तर त्योभन्दा उत्तम जातीय साहित्यको विकास र प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो । समग्र देशकै प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमता हामीमा छ छैन? त्यो आफैँले सोच्ने कुरा हो । स्वयम् बलियो नभएपछि परिवार बलियो बनाउँछु भनेर हुँदैन । घरै बलियो नभएपछि समाज कसरी बलियो हुन्छ ? राष्ट्रै दरो नबनेपछि विश्व कसरी बदल्नसकिन्छ ? त्यसैले पहिला आफ्नो घर बलियो बनाउनुपर्छ । समाज दरो बाउनुपर्छ । बलियो समाजले नै व्यक्तिको प्रसिद्धि र प्रतिष्ठा दुवै उच्चाइमा पुर्याउनसक्छ । यद्यपि जातिको स्वभिमान,अस्तित्व र पहिचान उसको भाषा हो । त्यसैले आफ्नो स्वभिमान,अस्मिता र अस्तित्वको आधार मानिएको नेपाली भाषाको उन्नतिमा जुट्न आजको आवश्यकता हो, भन्ने मलाइ लाग्छ ।
Previous articleOne day soccer tourney in KY
Next articleUbhauli festival and Kirati congregration held in TN